५५ प्रतिशत कोरोना भाइरस पादबाट सरिरहेको छ भन्ने विज्ञले दिएको यस्तो तथ्यबाट दुनियाँ चकित – Bishal4You
Bishal4You ५ जेष्ठ २०७७, सोमबार १५:११
विश्वभर महामारीका रुपमा रहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले हाम्राबीचमा धेरै कुराहरु कुराहरु ल्याएर आएको छ । यो के हो ? कसरी फैलन्छ ? रोकथाम गर्न के गर्ने ? यी अत्यन्तै महत्वपुर्ण प्रश्नहरु हुन् । किनभने मान्छेहरु आ–आफ्नै तरिकाले यी र यस्तै प्रश्नहको जवाफ दिदैंछन् । सामान्य रुपमा हेर्दा अहिले कोरोना भाइरस एक प्राकृतिक महामारी भएको बताइन्छ ।
उनले थप्दै्र भनिन, ‘तपाई खोकी वा हाच्छिउँ गर्नुहुन्छ, वा कडा सतहमा छुँदा तपाईको हातले मुख छोपेर खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा नजिकको व्यक्तिको सम्पर्कमा भाइरस आउँन सक्छ ।’ जे होस्, डा.। जार्विसले मानिसहरूलाई शौचालयको राम्रो सरसफाई राख्न आग्रह गरेकी छन् । यसरी पनि पादमा पनि भाइरस देखिएको प्रमाण फेला पर्न सक्छ ।
उनले भनिन, ‘कोरोनाभाइरसको केहि रिपोर्टहरू पूमा अवस्थित छन् । खोकी र ज्वरोजस्ता अन्य लक्षणहरू प्राप्त गर्नु अघि एक वा दुई दिनमा एकपटक पखाला हुने १० जनामा ​​एक जना थिए । यसले बाथरूम सफा गर्ने सम्बन्धमा थप सावधानी अपनाउनुको महत्त्वलाई जोड दिन्छ भने यदि कसैलाई कोरोनाभाइरसका लक्षणहरू छन् भने अर्कोलाई यसरी पनि संक्रमण हुन सक्छ ।’
सन् २००१ मा, अष्ट्रेलियाली डाक्टर कार्ल क्रुस्लेन्की र सूक्ष्म जीववैज्ञानीक ल्यूक टेनेन्टले एक प्रयोग गरी पादले रोग सार्न सक्छ कि भनेर पत्ता लगाएका थिए । डा. टेन्नेन्टले एक साथीलाई दुई सेन्टिमीटरको दूरीबाट सिधा भाँडामा पाद्न भन्यो । यस्मा पहिले पाइन्ट लगाएर अनी त्यसपछि नलगाएर पाद्न लगाइएको थियो । तिनीहरूले फेला पारे कि पहिलो पेट्री डिश सफा नै रह्यो, जबकि दोस्रोलाई ब्याक्टेरियाहरू रातभरि अंकुरित रहेको देखियो ।
तर परीक्षणमा पाइएका ब्याक्टेरिया हानिकारक थिएनन् । यस वर्षको सुरूमा, चीनको रोग नियन्त्रण एवं रोकथाम केन्द्रले घोषणा गर्‍यो कि प्यान्ट कोरोनोभाइरस बोक्ने मुसा विरुद्ध प्रभावकारी अवरोध हुनुपर्दछ ।
स्वास्थ्य निकायले यदि प्यान्टहरू लगाउँदछ भने कि मुसाले भाइरस सार्न असम्भव छ भनेका थिए । यद्यपि उनीहरुले चेतावनी दिए कि यदि संक्रमित बिरामीले पाइन्ट लगाउँदैन भने, उनीहरूले ठूलो मात्रामा पाद छोडे अनी त्यो पादलाई कसैले सुगन्धित गरे भने जोखिममा पर्न सक्छन् । यस महिनाको शुरूमा, वैज्ञानिकहरूले मानिसहरूलाई फ्लश गर्नु अघि शौचालय बन्द गर्न आग्रह गरे किनभने उनीहरू भन्छन् कि ‘एरोसोलिज्ड पू’ मार्फत कोरोनोभाइरोस फैलिन सक्छ ।
एउटा अध्ययनले भन्छ कि ‘शौचालय प्लम’ को कारणले दिसा र पिसाबलाई शौचालयबाट हावामा धकेल्न र अन्य सतहहरूमा फैलाउन सक्छ । स्वास्थ्य विज्ञहरू भन्छन कि कुनै पनि प्रकारको कोरोनोभाइरस रोक्न उत्तम तरिका राम्रो सरसफाइ नै उत्तम तरिका हो । तपाईको संक्रमणको जोखिम कम गर्न तपाईले आफ्नो हात साबुन र पानीले प्रायः २० सेकेन्डसम्म धुनु पर्छ, तपाईको आँखा, नाक र मुखलाई अनावश्यक रुपमा हातले छुनु हुँदैन र बिरामी मानिसहरूसँग सम्पर्क गर्दा माक्स, पीपीई लगाउँनुपर्छ ।
यदि तपाईलाई चिसो कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षणहरू छन् भने, तपाईं अरूलाई बचाउन मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ र बिरामी हुँदा घर भित्र रहँदा अरूसँग हुने अनावश्यक सम्पर्कबाट बच्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले आफ्नो मुख र नाकलाई टिशूले कभर गर्नुपर्दछ । जब तपाईं खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्नुहुन्छ । त्यो बेला प्रयोगपछि उक्त टिशुलाई टाढा फाल्नुहोस् र आफ्नो हात राम्रोसँग धुनुहोस् । तपाईंले छुनु भएको वस्तुहरू र सतहहरू सफा र डिसइन्फेक्टिंग पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । Source : thesun.co.uk
२७ फाल्गुन २०७६, मंगलवार १७:०६